ကျောချင်း ကပ်ရမည့်အချိန် | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| June 19, 2012 | Hits:4,786
20 | | မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မြန်မာများကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပြန်လည် ဂုဏ်တက် ထည်ဝါစေသည့် ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က နိုဘဲလ် ဆုချီးမြှင့်ပွဲသတင်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ကြည့်ရှုရင်း မြန်မာပြည်သား အများစု ဝမ်းသာဝမ်းနည်း ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကြီးက ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ထည်ဝါစွာ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို လက်ခံရယူရုံမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နားထောင်ကြည့်ရှု နေသူ များကိုပါ ၎င်း၏ နိုဘဲလ် မိန့်ခွန်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တို့၏ အရည်အချင်းကို ပြသသွားခဲ့သည်။
အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက် facebook စာမျက်နှာများ၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းစာများ၊ အာဆီယံ နိုင်ငံများ၏ သတင်းစာ များတွင်ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပ ခရီးစဉ် သတင်းကို ဓာတ်ပုံများ ဝေဝေဆာဆာဖြင့် ဖော်ပြထားကြသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာပြည်သားများ ဘဝင်မကျ၊ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းကို မြန်မာအစိုးရပိုင် မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြမှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်၍ တခြားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကဲ့သို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ဂုဏ်ယူခြင်း မရှိသောကြောင့်လား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းကို မဖော်ပြသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိနေပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥရောပခရီးစဉ်မတိုင်ခင်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ဖိုရမ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ရုံမက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား များကိုရော၊ ဒုက္ခသည် များကိုပါ သွားရောက် တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့သေးသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်အပြီး ထိုင်းအစိုးရက ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမား များ၏ လုပ်ခလစာကို တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်ကြောင့် ၎င်းနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ အကြား ဆက်ဆံရေး အနည်းငယ် အထစ်အငေါ့ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ်ကို ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာခဲ့ပြီး နောက်တွင် သမ္မတက ၎င်း၏ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများ အကြောင်းပြု၍ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည့်အပေါ် လေ့လာသူများက ထောက်ပြကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်နှင့် ဥရောပခရီးစဉ်အကြား ရခိုင်ပြည်၌ ပြဿနာမီးပွား ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်ပဋိပက္ခ ကျယ်ပြန့်လာရခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် နောက်ပြန်လှည့် လိုသူများ၏ ပယောဂများ မကင်းဟု ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ ပြန်လည် ပါဝင်လာသောကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်လိုသူများ အတွက် အကြပ်ဆိုက်မည်ကိုလည်း စိုးရိမ် ခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အဓိကရုဏ်းအထိ မဖြစ်ရလေအောင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ၍ ထိန်းသိမ်းနိုင်လိုက် သောကြောင့်သာ တနိုင်ငံလုံးကို လောင်မီး မပြန့်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ မှောင်မိုက်ခဲ့သော မြန်မာပြည်တွင် ယခုအခါမှ အလင်းရောင်ငယ်လေး တစကို စတင် မြင်ရခါစ ဖြစ်သည်။ ထိုအလင်းရောင်မှာလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၏ ရလဒ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို အလင်းစက်ကလေး မပျောက်သွားရန် ၎င်းတို့နှစ်ဦး ဆက်လက် ညီညွတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ယခုလက်ရှိ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းများအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ဥရောပ နိုင်ငံများ အပါအဝင် နိုင်ငံကြီး အသီးသီး အပေါ်တွင် သြဇာသက်ရောက်မှု အရှိန်အဝါ ကြီးမားနေသည်ကို ငြင်းဆို၍ မရနိုင်ပါ။ စစ်မှန်သော ပတ္တမြား နွံနစ်ရိုး ထုံးစံမရှိသကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်တွင် မည်သည့် နွံအညစ်အကြေးနှင့် ဖုံးကွယ်၍ မရနိုင်သည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် အသိအမှတ် ပြုရပေလိမ့်မည်။
တိုင်းပြည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားကို လိုသကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကလည်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းစဖော် လုပ်ကိုင် နေမှုများကို အပြုသဘော ချီးကျူးအားပေးပြီး အရှိန်ကောင်းနှင့် ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ရန် ကူညီရပေမည်။
ယခု အချိန်သည် နောက်ကို ပြန်လှည့်သွားနိုင်သေးသော အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးသော ကာလဟု သုံးသပ် မိပါသည်။ သန်း ၆၀ သော ပြည်သူပြည်သားတို့ အတွက် စေတနာရှိရှိ အလုပ်လုပ်နေသော တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များ ဆိုလျှင် ယခုအချိန်က ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကျောခြင်းကပ်၍ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချိန်ကောင်းဟု ဧရာဝတီက ယုံကြည်ပါသည်။
NLD တာထွက် ကောင်းရဲ့လား
အာဏာ သိမ်းခြင်းသည် အဖြေမဟုတ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment မဟော်သဓာ June 19, 2012 - 10:29 pm	အချိန်အခါနှင့်ကွက်တိဖြစ်အောင် ရေးသားဖော်ပြပေးသော အယ်ဒီတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းဦးစွာပြောလိုပါသည်။ ကျွန်တော်အလွန်တရာခံတွင်းတွေ့သော အာဘော်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲကို လိုချင်နေသူအားလုံးလည်း တစ်သဘောတည်းရှိမည်ထင်ပါသည်။ သမ္မတနှင့်တကွ အပြောင်းအလဲလိုချင်နေကြသော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အားလုံး ဒေါ်စုကိုဝန်းရံကူညီကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ ဒေါ်စု အနောက်နိုင်ငံတွေသွားပြီး ဆုလက်ခံယူယုံသာမက တိုင်းပြည်အတွက်၊ပြည်သူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် စွမ်းဆောင်ပြောကြားနေတာ အားလုံးအမြင်ပါပဲ။ ဒါကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလူထုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တွေ သွားယူနေတာကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာတောင် ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင် သဘောထားသေးသိမ်တာတော့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၊ယောက်ျားတွေ မပီသရာကျတာမို့ အလွန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ သတိပေးချင်ပါသည်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေပီသအောင် တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူ့အကျိုးကိုပိုကြည့်ပေးကြပါ။ ။ ကိုယ့်အကျိုးကိုလျော့ကြည့်ကြပါ။ သမိုင်းကောင်းတွင်ရစ်နိုင်ကြပါစေ။
Reply	ug... June 20, 2012 - 11:59 am	ဒေါ်စု ပြောတဲ့ စကားတခွန်း၇ှိပါတယ်.. သူ့ ရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုကိုယ်စားပြုလာတဲ့ ခရီးစဉ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါ.. ဒီစကားကိုစေ့စေ့စပ်စပ်သေချာတွေးကြည့်ရရင်.. နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုကိုယ်စားမပြုမှတော့မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုလာတာမဟုတ်ဖူး.လို့ ဆိုလိုတာနဲ့ တူတူပဲ… သူ့ ၇ဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ ဖြစ်တဲ့ နိုဘယ်လ်ဆု ယူဖို့ နဲ့ ယူ တူး စတိတ်ရှိူးပွဲ ကြည့်ဖို့ အပျော်ခရီးထွက်လာတာလို့ သွယ်ဝှိုက်ပြောလိုက်တာနဲ့ တူတူပဲလို့ ကျနော်သုံးသပ်မိပါတယ်….
Reply	Yan Naing June 20, 2012 - 4:56 am	Excellent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply	Sao Khun Wan June 20, 2012 - 6:26 am	I asacitizen of Myanmar feel shame of our Media headed by u kyaw san who declared his ministry to be international and ethical. Now everybody can realize their genuine concept to the daily news of what and how Daw Suu is doing the progress of Myanmar political movement on the International Political Stage. This present state media and their current news are full of bias and prejudice. We people haven’t got any confidence on the Myanmar state media.
Reply	ပြည်စိုး June 20, 2012 - 9:29 am	အင်း ဒေါ်စုကြည် ဆုလက်ခံယူတာထက် ရခိုင်အရေးကို စိတ်ဝင်စားသူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၃ ပုံရင် ၂ ပုံ ကျော်ကျော်ရှိပါတယ်. ဘယ်သူ့ကို မေးမေး ရခိုင်အေ၇းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ. . . တဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အများအတွက်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးရမှာလဲ. တကယ်လိုပဲ ဒေါ်စုက ပြည်သူတွေအပေါ် ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီလောက်နယ်စပ်ပြသ၁နာအရေးကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမှာပေါ့. မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာပီး ဘင်ဂလီတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အခြားနိုင်ငံတွေ လက်ခံနိုင်အောင် ရှင်းပြရမှာပေါ့. အခုတော့ ဘင်ဂလီ အရေး ဘာတွေများ `ဟ` ဖူးလို့လည်း ဘင်ဂလီတွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားလို့တောင် ပြောချင်နေတာ. . .
Reply	ug June 20, 2012 - 12:10 pm	ခင်ဗျား သဘောထားနဲ့ ကျနော့သဘောထား .. တူနေတယ်.. ကျနော်လဲ ဒေါ်စုကို အခုလို မြန်မာအစိုးရကိုကိုယ်စားပြုခရီးမဟုတ်တဲံ့ (မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုလာတာမဟုတ်ပါလို့ဆိုလိုတာနဲ့ တူတူပဲ) ဒီဥရောပခရီးစဉ်ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်…. သူ့ ၇ဲ့ အရည်ချင်းနဲ့ ထက်မြက်မှု ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုတော့ အသိမှတ်ပြုပါတယ်.. ဒါပေမဲ့့ နိုင်ငံတကာမှာ သူပြောလိုက်တဲ့ မိန့် ခွန်းတွေက ..မြန်မာနိုင်ငံအစိုး၇ရဲ့ ထင်သင်မြင်သာ၇ှိတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေက..ဖွင့်ပေးတော့မယ်တံခါးကို သူမကိုယ်တိုင်ပြန်ဆွဲစေ့ပြီး ပိတ်ချင်နေတာနဲ့ တူနေပါတယ်…..
Reply	်father of ug June 20, 2012 - 2:49 pm	ကြံ့ဖွတ်နောက်လိုက်။ မင်းကဘာသိလို့အမေစုကိုဝေဖန်တာလဲ။
Reply	mya June 20, 2012 - 5:38 pm	ဘုရားတောင် ဒေ၀ဒတ်ဆိုတဲ့ အနှောက်အယှက် ကောင်ရှိသေးတာဆိုတော့ ခုလို ဘုမသိဘမသိ ပေါက်ပန်းစေး ကောင်တွေ အမေစုကိုဝေဖန်တာ မဆန်းပါဘူးလေ-ခွင့်လွတ်ရမှာပေါ့-
Reply	Ag Ag June 21, 2012 - 7:04 pm	ug တို့ ပြည်စိုး တို့ မှန်တာပြောတော့ hudden due to low comment rating
တကယ်တန်းတော့ ဒေါ်စု ရဲ့ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာဘာတွေများတိုင်းပြည်နဲ့လူထုအပေါ်
ထိုင်းသွားတုံးက ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်စေချင်သေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် အဲဒီအကျိုးဆက်က အမေရိကန်လွှက်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့ရေး
တနှစ်ဆက်ပြီးလုပ်အုံးမယ်လေ။ ပြည်သူတွေဘဲနစ်နာကြအုံးမှာမဟုတ်လား အရင်တုံးကလဲဒီပိတ်ဆို့ရေးတွေကြောင့်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများ
အခုသွားရင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာပြသနာဖိအားမပေးဘို့ပြောလာနိုင်မလား ဒါမှမဟုက်
us မွေးတားခဲ့ကဲ့ KIA နဲ့ပြေလည်မှုရအောင်ပြောလာနိုင်မလား ဒါမှမဟုက်
Reply	aung ko June 22, 2012 - 9:03 am	မြန်မာတွေကတော့အချင်းချင်းကိုက်မယ်။အရေးကြီးလို့သွေးစည်းရမယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုကလုပ်သလို၊ဟိုအုပ်စုကဖန်တီးသလို၊ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ပဲတရုပ်ကျွန်၊ကုလားကျွန်ဖြစ်မဲ့လူမျိုးတွေ။ဗိုလ်ချုပ်ကို မင်းတို့တမ်းတနေပေမယ့်ဗိုလ်ချုပ်ကမင်းတို့လိုလူမျိုးတွေကိုလက်ခံချင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာဒီလူမျိုး၊ဒီနိုင်ငံနဲ့မတန်ဘူး။ဒါကြောင့်ကံတရားကသူ့ကိုစောစောသေခိုင်းလိုက်တာ။ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစီုးရဘဲရမယ်။အမေစုသာအော်နေတာ။ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက်နေတာပဲ။အမေစုဆုတွေရလို့၊မွေးနေ့မို့လို့၊ကုန်ဈေးနှုံးတွေကျသွားလား၊ကုန်သည်တွေလဲ NLD ဝင်တွေအများကြီးဘဲ။ဒေါ်စုလဲဒီဆုတွေမက်မောနေတာနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုအတော်များများစွန့်လွှတ်ရပြီ။ကျွေးတိုင်းလဲမစားနဲ့။ပေးတိုင်းလဲမယူနဲ့တဲ့။သူ့ကျွန်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ဆုဆိုတာပြည်သူလူထုကပေးတဲ့ဆုကပိုကောင်းပါတယ်။ငါးမျှားချိတ်နဲ့တွေ့မှာစိုးရိမ်ပါတယ်။နောက်ခံ Back Ground အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလုံးဝလက်ခံလိုက်ပါပြီ။အမေစုဆုတွေရလို့ဝမ်းသာသလို ၈၈ ဦးကိုကိုကြီးတို့ဘာမှမရတာကိုတော့ဘဝင်မကျဘူး။နိုင်ငံခြားမှာမကြီးပြင်းခဲ့ရလို့ဖြစ်မယ်။ဦးသန့်အတွက်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ဘယ်သူ့ဆီကမှဘာမှမရလိုက်ဘူး။ကျွန်တော့်အတွက်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ထမင်းဖိုးနေ့တွက်မရပဲ comment ရေးနေရလို့။
Reply	Terrence June 22, 2012 - 9:23 am	The first thing that comes to mind when reading the criticisms of the Lady is jealousy and envy from the government and their followers alike. They know that no one else in the current government is of such quality and high standing in terms of morality, principles, farsightedness and bigheartedness. They are displaying every bit of character, standard and poor upbringing as much opposite as the Lady is full of grace. Instead of taking pride in one of the finest examples of human dignity of our time, they take every little opportunity to belittle, undermine and smear her name and what she stands for. They just can’t see far beyond their immediate servile needs for selfish reason simply because they know that they are becoming obsolete and heading into oblivion in the new democracy friendly society of tomorrow Burma. They are simply too egocentric to grasp the meaning of freedom, principles and human dignity which DASSK stands for.
Lest they forget, they were given more than two decades, five decades if counted from 1962, to rule and develop Burma. What is the result? It doesn’t takearocket scientist to see that Burma is now on par with the poorest and the most laggard countries not only in Asia but on the whole earth. Had it not been for DASSK and freedom fighters, Burma today will still be under the dark ages ruled by the uneducated and the nonintellectuals, to say the least, very much similar to North Korea.
Reply	Khine June 22, 2012 - 7:38 pm	I really like your article. This is the real situation in our country. We must be united. Please support president U Thein Sein and Daw Su. I think they are really good, don’t waver.
Reply	nha sai June 27, 2012 - 12:12 pm	ခုလျောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းမှာ တစ်ခုပဲပြင်လိုက်ရုံနဲ့အားလုံးကောင်းသွားမယ်..
Reply	Nay Htet August 4, 2012 - 2:00 pm	Ug,I can see ur level from ur comment.